Soo-saarista Mawduucyada Dijitaalka ah: Waa maxay badeecadda dhammaadka ah? | Martech Zone
Wednesday, September 30, 2015 Wednesday, September 30, 2015 Douglas Karr
Sidee u qeexaysaa alaabta dhamaadka ee wax soo saarkaaga? Waxaan la halgamayay aragtida suuqleyda ee soo saarista waxyaabaha dhijitaalka ah. Waa kuwan waxyaabaha aan weli maqlayo:
Waxaan dooneynaa inaan soo saarno ugu yaraan hal boosto maalin kasta.
Waxaan dooneynaa inaan kordhino mugga baaritaanka sanadlaha ah 15%.
Waxaan dooneynaa inaan ku kordhino hogaaminta bil kasta 20%.
Waxaan dooneynaa inaan labalaabno qadka aan ku leenahay sanadkaan.
Jawaabahaani waa xoogaa jahwareer maxaa yeelay qiyaas kasta waa a dhaqaaqin mitir. Halbeeg kasta oo kor ku xusan wuxuu leeyahay mug, dherer waqtiga la xiriira, iyo ku tiirsanaan aan la xakamayn karin oo ku tiirsan doorsoomayaasha ka baxsan koontaroolka suuqleyda.
Qoraallada maalinlaha ah ee loo yaqaan 'blog posts' waxay u dhigmaan sheyga dhammaadka, waa wax soo saarka. Kordhinta mugga raadinta waxay kuxirantahay tartanka iyo isticmaalka mashiinka raadinta iyo algorithms. Kordhinta hoggaanku waxay kuxirantahay ku-habboonaanta beddelaadda, dalabyada, tartanka iyo arrimo kale - gaar ahaan rajada. Dhegeystayaashaada warbaahinta bulshada ayaa tilmaamaya awooda iyo awooda aad u leedahay inaad kobciso waxyaabaha, laakiin markale - waxay badanaa ku tiirsan tahay doorsoomayaasha kale.
Ma dhahayo mid ka mid ah cabbiraaddan ayaan muhiim ahayn. Waan la soconaa dhammaantood. Laakiin waxa aan dhihi doono ayaa ah waxaan aaminsanahay in kuwa ka ganacsada waxyaabaha ay ka maqan yihiin BIG, BADAN, GIANT, shey dhammaad ah… taasna waxay horumarinaysaa maktabad dukumiinti dhammaystiran oo ka kooban.
Shan qoraal oo blog ah usbuucii ma shaqeyn doonaan? Taasi kuma xirna inta jeer; waxay kuxirantahay farqiga udhaxeeya waxyaabaha aad horey u daabacday iyo waxyaabaha ay dhagaystayaashaadu raadinayaan.
Waa Maxay Mawduucaagu Muuqaal ahaan?
Markaad daawato bartilmaameedkaaga bartilmaameedka ah, maxay yihiin mawduucyada - gaar u ah waxsoosaarkaaga - inaad dhisi karto maamulka oo aad wax ku qori karto taas oo ka caawin doonta inay ku guuleystaan ​​shaqadooda iyo ganacsigooda? Istaraatijiyaddaada iyo istiraatiijiyadda suuqgeynta waxyaabaha ku saabsan kuma eka inay qoraan wax soo saarkaaga iyo adeegyadaada… taasi waa tan ugu yar ee qaawan U noqoshada il wax ku ool u ah akhristayaashaada iyo dhisida kalsooni iyo awood ka caawisa inay guuleystaan
Miyaad dhammaystirtay xisaabinta bartaada si aad u ogaato dhacdooyin badan oo ka mid ah mawduucyada aad yareyn karto oo aad hagaajin karto, oo aad garato nusqaamaha nuxurka aanad ka qorin baahidaas?
Miyaad hirgalisay qaab lagu cabiro saameynta waxyaabaha kujira isku beddelka si aad mudnaanta u siiso hagaajinta macluumaadkaaga hadda jira iyo cilmi baarista oo aad u horumariso waxyaabaha harsan?
Ma hubo sida aad ugu suurtogal u cabbiri karto guusha istiraatiijiyad suuqgeyn ah adigoon si fiican u falanqeyn muuqaalka aad rabto inaad amar ku bixiso. Waxtar ma leh in la fahmo tirada farriimaha toddobaad kasta si loo qoro illaa aad fahanto inta qoraal ee aad u baahan tahay inaad ka gudubto. Laga yaabee inaad ubaahantahay inaad qoroso sadex jibaar inta jeer ee usbuuc walba si aad u amarto koritaanka aad ka raadineyso warshadahaaga.
Sidee u qorsheyneysaa adigoon qeexin sheyga ugu dambeeya?
Isbarbardhig ayaa lagu horumarin doonaa safka isku imaatinka wax soo saarka oo taayirrada ka soo saaraya maalintii oo dhan isla markaana rajeynaya inuu dhammaystiro dhismaha baabuur. Qaar ka mid ah su'aalaha kor ku xusan waxay ku saabsan yihiin ku guuleysiga tartanka… laakiin xitaa ma lihid qaybo kugu filan oo aad ku hesho mashiin socda!
Fadlan ha u maleynin inaan isku dayayo inaan fududeeyo tan. Waa geedi socod aad u adag oo qaadanaya tan cilmi baaris ah si loo aqoonsado taxonomy, istiraatiijiyad iyo istiraatiijiyooyinka mudnaanta leh ee lagama maarmaanka u ah wax soo saarka ugu macquulsan. Ma ahan wax aan macquul aheyn, laakiin way adag tahay. Si kastaba ha noqotee, markaad aqoonsato baaxadda alaabta dhammaadka, waxaad bilaabi kartaa inaad qaado tallaabo badan oo ula kac ah oo aad horumariso qaar ka mid ah rajooyinka natiijooyinka.
Tags: muuqaalka muuqaalkamudnaanta waxyaabahawax soo saarkawax soo saarka waxyaabaha dhijitaalka ah
Wicitaanada Waxqabad - In kabadan Badhanno Kaliya Boggaaga